Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 11:58
Euro - Oo shilin Soomaali qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
11:58:18 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 EUR = 626.79 SOS
1 SOS = 0.0016 EUR
Isha sicirka sarrifka ayaa ah sarrifka Forex. Eeg Euro sicirka sarrifka 30 ilbiriqsi kasta. Heerka Euro sicirka waxaa lagu muujiyey khadka tooska ah. Isla markiiba Euro to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka.
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali si Euro ku nool 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex Euro In Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Shaxanka kor ku xusan waa muuqaal muuqaal ah oo ah Euro to Oo shilin Soomaali. Ka eeg isbeddelada sicirka degdega ah ee shaxanka. U isticmaal qalabyada ku yaal shaxanka sawirka saxda ah Euro to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka. Garaafka isbadalada ee Euro ee ku Oo shilin Soomaali si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa.
Beddelaan Euro In Oo shilin Soomaali Euro In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Euro In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online Euro (EUR) si Oo shilin Soomaali xilligan
Isbedelka ku yimid Euro ee ku Oo shilin Soomaali waa la daawan karaa daqiiqad kasta. Kordhinta Euro ( EUR) ku Oo shilin Soomaali heerka daqiiqadani waa - 0.05 SOS. Taariikhda sarrifka daqiiqadaha ugu dambeeya ayaa lagu muujiyey jadwalka. Waxaan leenahay miis qiimayaal ah 10kii daqiiqo ee la soo dhaafay si si fudud loo arko.
11:57 11:56 11:55 11:54 11:53 11:52 11:51 11:50 11:49 11:48
626.79 626.74 626.70 626.73 626.64 626.62 626.61 626.57 626.41 626.59
Ganacsi Online Euro (EUR) si Oo shilin Soomaali ganacsi ee la soo dhaafay saac
Isbeddelka sicirka beddelka ayaa la daawan karaa saacad kasta. 0.88 SOS saacaddiiba way kordhisay Euro ( EUR) ku Oo shilin Soomaali. Qiimeyaasha Euro ee ku Oo shilin Soomaali saacad kasta waxaa lagu muujiyey jadwalka boggan ku yaal. Waxaan leenahay miis qiimayaal ah 10kii saacadood ee la soo dhaafay si si fudud loo arko.
11:54 11:48 11:42 11:36 11:30 11:24 11:18 11:12 11:06 11:00
626.73 626.59 626.18 626.37 626.22 625.98 625.87 625.70 625.84 620.86
Ganacsi Online Euro (EUR) si Oo shilin Soomaali arrimuhu maanta 24 May 2022
11:57 10:57 09:57 08:57 07:57 06:57 05:57 04:57 03:57 02:57
626.79 625.84 626.29 625.11 625.17 624.92 624.95 624.67 626.04 622.66